Mobile Legends ရဲ့ Twilight Pass ကိုဝယ်သုံးရတာ တန်ရဲ့ လား ။ | Codashop Blog MM
ဘော်ဒါတို့ရေ Mobile Legend ကနေ Twilight Pass ကိုအသုံးပြုရတာတန်တယ်လို့ထင်ရဲ့ လား ? ဒီလိုမေးခွန်းကတော့ Mobile Legends ကစားတဲ့သူတေ်ာတော်များများမေးတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Twilight Pass promotion ကတော့ အားလုံးအတွက် သင့်တော်တဲ့ဟာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဘာလို့မသင့်တော်လည်းဆိုတာကိုတော့ သင့်အနေနဲ့ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခုပဲ စာကိုသေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Twilight Pass ဆိုတာဘာလဲ?
Twilight Pass ဆိုတာ ကစားသမားတွေအတွက် ဆုတွေနဲ့ တစ်ခြားသော သီးသန့် Skin တွေကို သင့်ရဲ့ Level ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ရရှိနိုင်မယ့် လက်မှတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Twilight Pass ကနေ ရရှိမယ့် အကျိုးအမြတ်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ ?
တစ်ကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ Twilight Pass ကိုမကြာခဏ ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူဖြစ်တယ်ဆိုရင် Twilight Pass ကနေဘာတွေပြန်လည်ရမလည်းဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Instant Reward အနေနဲ့ကတော့ 200 Tickets, 1 Glorious General Trial Card, 1 Diamond Hero Trial Card Pack ကို တစ်ရက်စာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Level 8 အတွက်ကတော့ 200 Tickets, Eudora’s “Flame Red Lips” Skin,2Diamond Hero Trial Card Pack (၁ ရက်စာ)
Level 10: 300 Tickets, 1 Star Protection Card,2Deluxe Skin Trial Card Pack (၁-ရက်စာ)
Level 12: 350 Tickets, 1 Double EXP Card ( ၃- ရက်စာ),5Luxury Ticket
Level 15: 350 Tickets, Miya’s Exclusive “Suzuhime” Skin,2Epic Skin Trial Card (၁ -ရက်စာ)
ဒီဆုတွေအားလုံးကို Level 20 ကျော်တဲ့ အချိန်ထိ ရနိုင်ဦးမှာလား ?
Mobile Legends ကစားသများအများစုကတော့ Codashop ကို ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေမေးလေ့ရှိပါတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ ဆုတွေနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကိုတော့ သင့်အနေနဲ့ Mobile Legends ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Level တွေအလိုက်ရနိုင်ပါတယ်
Twilight Pass ကိုဘယ်လိုရယူနိုင်သလဲ ?
Codashop ကနေ Twilight Pass ကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကယ်အသုံးပြုစရာမလို ၊ Log in ၀င်စရာမလိုပဲ Codashop ကနေ၀ယ်ယူနိုင်တာကြောင့် Mobile Legends ကစားသမားတွေအတွက်အဆင်ပြေလှပါတယ်။
၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေးခု အတိုင်းလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ Mobile Legends ကနေ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Step 1 : Twilight Pass ကိုရယူဖို့အတွက် Codashop ရဲ့ ဒီလင့်ခ် ( https://www.codashop.com/ph/mobile-legends-twilight-pass ) ကိုသွားပေးပါ။
Step2: သင့်ရဲ့ Mobile Legends ID ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Step3: သင်ပေးဆောင်ချင်တဲ့ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပေးပါ။
Step 4: ရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ သင့်ဝယ်ယူမှုကအောင်မြင်ပါပြီ။
သင်က အခုမှ Mobile Legends ဂိမ်းကိုစကစားတဲ့သူဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ဂိမ်းကစားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အတွက် Twilight Pass ကိုရယူသင့်ါပတယ် ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာ Mobile Legends Pro တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Miya ရဲ့
အထူးသီးသန့် Skin ဖြစ်တဲ့ Suzuhime ကိုမှသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်း Twilight Pass ကိုရယူသင့်ပါတယ်။
Previous articlePUBG UC ကို Codashop ကနေ ဘယ်လိုဝယ်မလဲ ?
Next articleMobile Legends ဂိမ်းမှာအနိုင်ရနိုင်မယ့် နည်းဗျူဟာများ
Orange 11 June 7, 2020	At	6:42 pm